गोरु काटेर खान पाउने कानुन बन्दैछरे
कानुन राज्यमन्त्रीले नै भनेपछि किन नपत्याउने ? कानुन राज्यमन्त्री भन्छन्– गोरु काटेर खान पाउने व्यवस्थासहितको कानुन बनाउँदै छौं ।
गाई गोरुलाई काटेर खान पाइन्न, कानुनी बन्देज छ तर सरकारमा बस्ने मन्त्री नै गोरु काटेर खान पाउने कानुन बनाउन उद्दत छन् भने समाजमा उथलपुथल हुनलाग्यो भन्ने बुझ्नुपर्छ । कानुन राज्यमन्त्री छन् दिलमान पाख्रिन, उनले लमजुङ पुगेर सरकारको यस्तो नीतिको खुलासा गरेका हुन् ।
मन्त्री दिलमान पाख्रिनका अनुसार मुलुक धर्मर्िनरपेक्षतामा गए पनि तामाङ समुदायले पुर्खौंदेखि उपभोग गर्दै आएको वस्तुमा बन्देज लगाइएकाले त्यसलाई कानुन बनाएरै फुकाउनुपर्ने उनले बताएका छन् । भारतका विभिन्न स्थानमा कानुन बनाएर बाटो खुलाइएको छ, नेपालमा पनि कानुन बनाएर बाटो खुलाइनेछ ।
तामाङ घेदुङ संघ कार्यकारिणी समिति लमजुङको आयोजनामा गत शनिबार सदरमुकाम बेसीसहरमा भएको सोनाम ल्होसार कार्यक्रममा बोल्दै राज्यमन्त्री पाख्रिनले गोरु काटेर खाएकै कारण कुनै पनि तामाङ जाति थुनिनुपर्ने अवस्था आउन दिन्न, कानुन बनाएरै यस्तो बन्देज हटाउन मैले काम गरिरहेको छु ।
‘भाषा, लिपि, मौलिक संस्कृतिको पहिचान, उत्पादन, निर्माण र समृद्धि हाम्रो साझा अभियान’ भन्ने मुल नाराका साथ लमजुङका तामाङहरुले धुमधामले सोनाम ल्होसार मनाएका छन् । ल्होसार मनाउने क्रममा मात्तिएका मन्त्रीले आफुले बोलेको कुरा थाहा भएर बोले कि नभएर, यसकारण यो प्रश्न उठेको छ कि राजधानी फर्केपछि यस विषयमा उनले मुख खोलेका छैनन् ।
केही दिनमै वाममोर्चाको सरकार बन्दैछ र यो समुदाय पनि सरकारमा सामेल हुनसक्छ । अव बन्ने सरकारले अहिलेको देउवा सरकारले गरेका निर्णय र बनाएका नीतिहरुमा पुनर्विचार गर्ने भनिसकेकाले मन्त्री पाख्रिनले भनेजस्तो गोरु काटेर खान पाइने कानुन बन्ला त ? यस विषयमा एमाले स्रोत भन्छ– यो धार्मिक द्वन्द्व बढाउने र पानी धमिलो पारेर माछा मार्ने षडयन्त्रमात्र हो, यस्तो खालको कुनै पनि कानुन बन्नेवाला छैन । त्यसो भए यस्ता मन्त्रीलाई कसले कारवाही गर्ने त ?